Incwadi evela kuMenenja uLawrence
I-Chengdu Taiyi Energy Technology Development Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2011 futhi yathuthuka esimweni somnotho wezimakethe. Ukuthatha umsebenzi obalulekile wokuthuthukiswa komkhakha wobunjiniyela kagesi waseChina, ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi yokusebenza okugxile ekulungiseni nasekucebiseni, iChina Electrical Engineering izuze ukuthuthuka kwe-leapfrog.
Le nkampani isebenze iPetroChina neSinopec iminyaka eminingi, futhi yenze okulindelwe futhi yazinikela kumaphrojekthi amakhulu angaphandle. Kusuka kumhlinzeki wemishini ephelele nomhlinzeki wesevisi kuya kumhlinzeki womkhiqizo ochwepheshe kanye nomhlinzeki wesevisi phezulu emakethe yaseChina. Ukuthuthukiswa kwe-China Electrical Engineering kususelwa ebuhlangeni nasekujulukeni kwabo bonke abasebenzi be-CLP, ngenxa yokubambisana nokusekelwa kozakwethu abavela kuzo zonke izizinda zokuphila, futhi akunakwehlukaniswa nothando nokwethembana kwamakhasimende ethu. Ngenkathi sakha izinzuzo zezomnotho, kungukuzibophezela kwethu kanye nomthwalo wethu wemfanelo wokuzibophezela ekuthatheni umthwalo wemfanelo wokusebenzisana kwezenhlangano, ukufaka isandla ekuthuthukisweni komnotho womhlaba kanye nasekuqhubekeni komphakathi, futhi sikhokhele bonke abasebenzi, ophathina abavela kuzo zonke izizinda zokuphila, kanye namakhasimende ngemiphumela yentuthuko.
Lapho kubhekene nokwanda kwamanje kwezinguquko zasekhaya nokulungiswa kanye nezinguquko zesakhiwo somnotho wamazwe omhlaba, iChina Electric ibhekene namathuba nezinselelo ezinkulu. Kuze kube manje, sizohlala sigcina ijubane lezikhathi nomphakathi, sigcina amanani ayisisekelo we "pragmatic and enterprising, reform and change, people-oriented, and win win win", sibe nesibindi sokusungula, siqhubekele phambili , futhi silwele "ukwenziwa kwamazwe ngamazwe ngezinsizakalo zemikhakha yokuthuthukiswa kwezimboni eziningi." Umbono "Wezebhizinisi" uthuthuka.